အမြဲတစေလိုက်လို့နေ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » အမြဲတစေလိုက်လို့နေ	19
- မမ အညာသူ
Posted by မမ အညာသူ on Jun 28, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
About မမ အညာသူ
မမ အညာသူ has written 12 post in this blog.
View all posts by မမ အညာသူ →	Blog
မမ အညာသူ says: ဂေဇက်ရွာကစာပေပညာရှင်တွေပဲများကျတယ်လေ
မဂွတ် ထော် says: သေရင်လဲဘာမှပါမလာနိုင်တော့ဘူးလေ
may flowers says: ညာ့ပိုစ့်လေး ဖတ်ပြီးသီလရှင် ၀တ်ရင်ကောင်းမလားတောင် စဉ်းစားနေတာ………………..။
မမ အညာသူ says: ဝတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မေဖလားရယ်
Khaing Khaing says: မမညာသူ သေခြင်းတရားကိုမမေ့ခဲ့ပါဘူး ညစဉ်ညတိုင်းအိပ်ယာဝင်ရင် တစ်နေ့တစ်နေ့ ငါဘယ်သူနဲ့ဘာတွေ ဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်စဉ်းစားမိတိုင်း ကိုယ့်လုပ်ခဲ့တာကောင်း၏ဆိုး၏ဆိုတာ တစ်ရေးရေးပေါ်လာခဲ့ တယ် လူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးမိ ဒေါသထွက်မိရင်တောင် ငါတစ်နေ့သေရမှာပဲ ဒါတွေက မသေခင်ဖြစ်နေ ရင် ငါပဲပူလောင်ခံစားရမှာဆိုတဲ့အသိနဲ့ အားလုံးကိုခ၀ါချနိုင်ခဲ့တယ် ပျော်ပျော်နေတတ်လာတယ် …. ဒေါသ ကလည်း ကြာရှည်မထားတတ်တော့ဘူး ……… လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ သုံးမျိုးထဲက လောဘကလွဲ ရင်ကျန်တာကို ဖြေဖျောက်နိုင်ခဲ့တယ် လောဘကတော့ အရွယ်ငယ်သေးတော့ အတန်အသင့်ထားရှိရသေး တယ်လေ …..
TNA says: အဲဒါကိုလဲ သိသိကြီးနဲ့ကင်းအောင်နေကြတာပါပဲ။
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ညာရေ….
ဇောက် ထိုး says: အိုးတစ်လုံးဟာ ကွဲတတ်တဲ့ သဘာဝကြောင့် အခန့်မသင့်တဲ့အချိန်ကွဲမှာပဲ။
အိုးလုပ်ပြီးလို့ မီးမဖုတ်ရသေးခင်ကွဲချင်လဲ ကွဲမှာပဲ။
မီးဖုတ်ပြီးလို့ အိုးကျက်သွားပြီးတဲ့နောက် ကွဲချင်လဲ ကွာမှာပဲ။
ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက အဲဒီအိုးဟာ အိုးဖြစ်ပြီး လူတွေကို ဘယ်လောက် ရေထည့်ပြီးတိုက်သွားနိုင်သလဲ.. ဒါအိုးရဲ့တန်ဖိုးပဲ။
တလကြာမှကွဲကွဲ.. တနှစ်ကြာမှ ကွဲကွဲ.. ၁၀ နှစ်ကြာမှကွဲကွဲ.. အမှိုက်ထဲ လူတွေဘာမှသုံးမရတဲ့အိုးဖြစ်နေမှာတဲ့စာရင်….
ဒီနေ့တရက်ထဲပဲ လူတွေက အိုးထဲရေထည့်သောက်လို့ ညနေရောက်ကွဲချင်ကွဲသွားပါစေ…
ကွဲမှာက ကြောက်စရာ မဟုတ်ဘူး။
မကွဲခင် ရေအထည့်မခံလိုက်ရမှာက မကောင်းတာ။
အဲဒီစာကြောင်းလေးကို အထက်အောက်ပြောင်းပေးရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေပေ့ါဗျာ….
စာအရေးအသားက လူထက်တောင် ချောနေသေး….
mamanoyar says: အင်း စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်
မမ အညာသူ says: အန်ကယ်ဇောက်ရေ
snow white says: ငါ သည် သေရတော့မည် အချိန်မဦးခင်ဥာဏ်ဦးရမည် ၀ိပသနာတရားကို ကောင်းစွာအားထုတ်ကျင့်ကြံပါမည် ဆရာတော်တစ်ပါးဟောဖူးတယ် ဆရာတော် ရဲ့ ဘွဲ့နာမည်တော့စနိုးမမှတ်မိတော့ဘူး ဆရာတော်ကဘာပြောလည်းဆိုတော့ တရားလုပ်မှတရားရတာမ ဟုတ်ဘူး တရားမလုပ်ဘဲစားတယ်စားတယ် စာရေးတယ်ရေးတယ် ဒါလဲတရားဘဲတဲ့ ဘုရားသွားမှကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်မှာ နေ့တိုင်း ဆွမ်းတော်ကပ်တယ် သောက်တော်ရေလေးလဲတယ် ဘုရားပန်းလေးကပ်တယ်ဆိုရင် လည်းကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ ညတိုင်းဘုရားရှိခိုးတိုင်း” ငါ သည် သေရတော့မည် အချိန်မဦးခင်ဥာဏ်ဦးရမည် ၀ိပသနာတရားကို ကောင်းစွာအားထုတ်ကျင့်ကြံပါမည်” ဟုအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ဆိုချင်းဖြစ် သေရတော့ မှာလားဆိုတာ မမေ့တော့ဘူးတဲ့ ။
ဖိုးထောင် says: အင်း ညာလေး ညာလေး ————————————————
ko khin kha says: တားမရ စီးမရ ရောက်ချင်တဲ့အချိန်ရောက်လာနိုင်တာ သေခြင်းတရားပါ။
ဒါပေမဲ့ မသိချင်ကြတာလဲ ဒီသေခြင်းတရားဘဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူရဲ့သဘောသဘာဝက ခွဲခွါကြရမှာကို မလိုလားတတ်ကြလို့ပါဘဲ။
ဒါကြောင့် သေခြင်းကို မေ့လို့များရနိုင်မယ်ဆိုရင် မေ့ထားချင်ပါရဲ့။
manawphyulay says: လူတိုင်းမှာ အရိပ်ဆိုတာ ရှိသလို သေမင်းဆိုတာ လူတွေရဲ့ အရိပ်တစ်ခုပါပဲ… မသေခင် ဘာလုပ်ကြမည်လဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ကြပါတယ်လေ။
Phaung Phaung says: စနှိုးဝှိုက်ရေ….“ အသေမဦးခင်၊ ဥာဏ်ဦးအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပါတော့မည်” ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်း ဆရာတော်ပါ။
သားဦး၊မြေးဦး says: (၁)ဇာတိ
မောင်ပေ says: ရှေ့ မှာ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ…
ဘေးမှာ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ…
အနောက်မှာ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ…
(ကိုလေးဖြူ လို ဆိုပစ်လိုက်သည်)
koko thant says: မမညာပြောမှပဲသေခြင်းတရားကို သတိရမိတယ် ကျနော်ကတော့ သေ ခြင်းတရားကို သတိမရဘူး
မမညာလည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရောလုပ်ဦးနော် ဆရာလုပ်တယ်လို့မထင်နဲ့ ပြောမဲ့သာပြောတာ
ကျနော်လည်းဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ရသေးဘူး မဂွက်ထော်ကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦး သေရင်ဘာမှပါမလား ဘူးဆိုရင် ဘာမှမလုပ်ပဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်နေလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် သီလရှင်ဝတ်ပါလားလို့ ဟဲဟဲ
မဂွက်ထော် စိတ်မဆိုးရဘူးနော် စိတ်ဆိုးရင်ကုသိုလ်ရဘူး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
mona smile says: မမ..သတ္တ၀ါ တခု ကံ တခု တဂျီး နှစ်ခု ပေါ့ ..မမ ၇ယ်..တရားနဲ့ဖြေ ရမှာပေါ့..(တဂျီ နှစ်လုံးပူးလဲး ကြောက်တယ်..တဂျီး တား လည်း ကြောက် ရပါရွေ့)